စွန်ငှက် Viper FS16 Fighting Lockheed Martin ကုမ္ပဏီမှ F-2004 DOWNLOAD - Rikoooo
အရွယ် 28.3 ကို MB
downloads ရယူရန္ 14 798
F-16 Fighting စွန်ငှက်လေယာဉ် 1970s စဉ်အတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဖွံ့ဖြိုးပြီး multi-အခန်းကဏ္ဍတိုက်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ 20 ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများထက် ပို. အားဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသော, တူရကီ, တောင်ကိုရီးယားမှာလိုင်စင်နဲ့လေးနေတိုးနိုင်ငံတွေအုပ်စုတစ်ခုအောက်မှာတည် 16 အတွက် F-2009 အများဆုံးကမ္ဘာ့အအသုံးပြုသောတိုက်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။4300th မိတ္တူ, ဧပြီလ 2006  တွင်ကယ်နှုတ်ခဲ့ပါတယ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုပင်ပို့ကုန်များအတွက် 2010s သည်အထိဆက်လက်သင့်သည်။ (ရင်းမြစ်ဝီကီပီးဒီးယား)
စွန်ငှက် Fighting F-16 ကောင်းသောတိမ်းပေးသောဒီဇိုင်းအားဖြင့်လေခွင်းမတည်မငြိမ်ပထမဦးဆုံးလေယာဉ်ပျံခဲ့ပေမယ့် FBW လိုအပ်သည်။ တစ်ခုတည်းအစွမ်းထက်ဓာတ်ပေါင်းဖိုနှင့်အတူက bi-အသံထက်မြန်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာ 9G အထိစုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
- လေယာဉ်မှူးရဲ့ထိုင်ခုံဝန်အချက်များကိုဆီးတားဖို့ 30 °မှာတစ်ဖက်စောင်းနင်းခဲ့သည်
- အကြီးမားကွေးဖန်သင်္ဘောသားအဘို့အမြင်သာ°မြတ်သော 360 ကိုထောက်ပံ့ပေး
- အ Joystick အကြာတွင် positioned နှင့် HOTAS (အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာနှင့် Stick တွင်လက်စွဲ) မှာများစွာသောပညတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်
F-16 Fighting စွန်ငှက် Viper awsome နှင့်ပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့် functional ပါ! အရာအားလုံးကသူ့ကို graphically လှပတဲ့ဖြစ်ပါသည်, လည်းရှိ၏။ မဆိုင်းမတွ download လုပ်ပါ။
ဒီအထုပ်အဲရစ် Marciano ဖြင့်ရေဒါများနှင့်တစ်ဦးဦးခေါင်းသည်-up က view finder ပါ (VTH) များပါဝင်သည်, ဒီရေဒါအခမဲ့မဟုတ်ပါဘူး, ငါသည်ဤ payware ရေဒါထက်မကအခြားရွေးချယ်စရာခဲ့, သို့သော်, သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သတင်းစကားတစ်ခုသတိပေးပါလိမ့်မယ်,5မိနစ်ကစမ်းသပ်နိုင်သည် သင်တစ်ဦးမှတ်ပုံတင် key ကိုလိုအပျကွောငျးသငျသညျ။ သငျသညျသင်တန်းဒါပေမယ့်ရေဒါမပါဘဲသို့မဟုတ်ဤ link ကိုမှအဓိကမဝယ် F-16 ပျံသန်းဖို့ဆက်လက်နိုင်သည်